यी हुन् साउथ फिल्मका सबैभन्दा महंगा ६ अभिनेत्री, कसको पारिश्रमिक कति ? « Etajakhabar
यी हुन् साउथ फिल्मका सबैभन्दा महंगा ६ अभिनेत्री, कसको पारिश्रमिक कति ?
एजेन्सी/बलिउडपछि साउथ फिल्म इन्डस्ट्री भारतको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो फिल्म इन्डस्ट्री हो। यहाँ काम गर्ने अभिनेत्रीको लोकप्रियता निकै रहेको छ। साउथ इन्डियन फिल्म पुरा भारतमा मात्र नभई अन्य देशमा पनि निकै चर्चा हुने गर्छ ।बलिउडपछि साउथ फिल्म इन्डस्ट्री भारतको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो फिल्म इन्डस्ट्री हो।जसका कारण पनि चर्चा निकै हुने गर्छ ।
साउथ फिल्ममा अभिनय गर्ने अभिनेत्रीहरूको बलिउड बजारमा पनि राम्रो माग हुनेगर्छ । जसका कारण उनीहरू फिल्ममा काम गर्न धेरै रकम लिन्छन्। कतिपय अभिनेत्रीको प्रोफाइल बलिउड अभिनेत्री भन्दा पनि धेरै माथि रहेको छ । आज हामी तपाईँलाई साउथ फिल्मका केही महँगा अभिनेत्रीको बारेमा चर्चा गर्दै छौ ।
१. काजल अग्रवाल:
साउथ इन्डस्ट्रीको टप टेन अभिनेत्रीमा काजलको नाम सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । हालै उनले बिजनेसम्यान गौतम किचलूसँग बिहे गरेकी हुन्। उनले तमिल, तेलुगु सहित हिन्दी फिल्ममा पनि काम गरिसकेकी छन्। उनी आफ्नो एक फिल्मको लागि तीन करोड लिन्छिन्। बलिउडमा उनले अक्षय कुमार र अजय देवगन जस्ता हिरोसँग पनि अभिनय गरिसकेकी छन् ।
२. सामन्था अक्किनेनी:
साउथ इन्डस्ट्रीको टप टेन अभिनेत्रीमा नयनतारा पर्ने गछिन् । लोकप्रियताको मामलामा नयनतारा साउथको अभिनेतालाई टक्कर दिन्छिन्। उनको फ्यान फलोइङ पनि निकै लोभलाग्दो रहेको छ । उनी एक फिल्मको लागि पाँच करोड रुपैँयासम्म पारिश्रमिक लिन्छिन्। उनी तमिल फिल्म इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा महँगो अभिनेत्री हुन्
४. तमन्ना भाटिया:
तमन्नालाई साउथ इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा सुन्दर अभिनेत्री मानिन्छ। उनी एक फिल्मको लागी २ करोड लिन्छिन्। उनले तमिल, तेलुगुको साथसाथै हिन्दी फिल्ममा काम गरिसकेकी छन् ।